Egypta: Mampiasa ny Twitter ho an’ny fahasalamana tsara kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2018 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, عربي, 繁體中文, Svenska, Ελληνικά, русский, 简体中文, Italiano, বাংলা, македонски, 日本語, English
Azo ampiasaina ve ny Twitter mba hamonjena ain'olona na hanatsarana ny fahasalamany? Nandritra ny fifandonana nitranga tao amin'ny Kianja Tahrir tany Egypta , nisy kaonty Twitter (@TahrirSupplies) noforonina mba handaminana ny fizarana ny fitaovam-pitsaboana any amin'ireo toeram-pitsaboana natsangan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao an-toerana sy nanodidina ny kianja, ary koa hizarana ny sakafo sy ny zavatra hafa nilaina tao an-toerana. Ny Healthy Egypt Tips kosa tetsy ankilan'izany, dia nanana hetsika hafa avy amin'ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo izay nanomboka ny kaonty Twitter (@HealthyEgypt) tamin'ny volana Aogositra 2011 mba hanaparitahana ny toro-hevitra momba ny fahasalamana tany Egypta.
@HealthyEgypt: Tsara kokoa ny kafe kelikely mielanelana noho ny kafe eran'ny kaopy lehibe iray mba hahamailo sy hifantohana.
Namaly ny fanontanian'olona ihany koa izy ireo, nanampy ireo fandraisana an-tanan'ny tsirairay, ary nampahafantatra ny momba ny fanabeazana ara-pananahana ihany koa izay fanontaniana maha-menatra ao an-toerana noho ny kolontsaina .
Nanomboka tamin'ny volana Aogositra izahay, tany amin'ny tapaky ny volana Ramadany tany ho any, ary tena nanaitra ny valintenin'ny mpanjohy, novidianay ny “www.healthyegypt.org sy www.healthyegypt.net” ary amin'izao fotoana izao izahay dia ao amin'ny dingana fanomanana fandaharana ho an'ny tranonkalanay mba hahafahanay manomboka tsy ho ela.
Tena marina izany, misioka amin'ny teny Arabo izahay indraindray fa tsy matetika, ary efa ao anatin'ny fandaharanay mihitsy ny tranonkala ho an'ny fiteny roa mba hahafahanay misarika mpitsidika bebe kokoa.
Mahazo domberina miabo ihany koa izahay amin'ny alàlan'ny Twitter avy amin'ireo olona maneho fa tena nanampy betsaka azy ireo ny torohevitra toy izany ary manentana azy ireo momba ny lohahevitra tsy sahy resahana izahay.